Ukwenza kahle kwe-OPcache PHP bootup > UVielhuber David
Ukwenza kahle kwe-OPcache PHP bootup09
Kumawebhusayithi asuselwe ku- WordPress , Joomla noma i- Laravel futhi angenakho okuqukethwe okuqondene nomsebenzisi, kungakuhle ukuthi ugcine wonke amakhasi ku-static HTML cache futhi uvuselele kuphela i-cache ngesandla (noma nge-othomathikhi) lapho kwenziwa izinguquko ku-backend. Kodwa-ke, uma ikhasi liqukethe okuqukethwe okunamandla okuxhomeke kumaseshini namakhukhi noma futhi ngolimi nendawo, i- OPcache ifanelekile .
Isikhathi esibizwa ngokuthi yi-boot sazo zonke izinhlelo ezintathu ezibalulwe singaphezu kwe-100 ms ngeseva entsha efakwe i-CentOS7 (ene-SSD ne-PHP 7.1). Njalo lapho kwenziwa iskripthi se-PHP, kufanele sihlanganiswe sibe yi-bytecode ngesikhathi sokusebenza. I-OPcache manje isebenzisa i-cache yale bytecode - uma iskripthi esifanayo se-PHP senziwa ngesicelo esilandelayo, akudingeki siphindwe. Ngemuva kokusebenzisa i-OPcache, sisetha izilungiselelo ezilandelayo:
Isikhathi sokubulawa (isilinganiso esilinganiselwe sokubulawa okungaphezulu kweshumi) manje sesincishiswe kakhulu:
I-WordPress 4.7.4 UJoomla 3.7 ILaravel 5.4
ngaphandle kwe-OPcache 295 ms 201 ms 110 ms
nge-OPcache 54 ms 59 ms 13 ms
Isici 5,5 3,5 8,5
Njengoba sibeka i-validate_timestamp to 0 futhi ngasikhathi sinye revalidate_freq isikhathi sosuku olulodwa, isilondolozi cishe asikaze sakhiwe kabusha ngokuzenzakalela (lokhu sikwenza ngesandla). Ngehhuku encane ye- git , iskripthi se-PHP senziwa ngayo yonke i- "donsa" Ungayisebenzisa kanjani i-hook:
Umsebenzi olandelayo womsizi nawo uyasiza ukukala izingxenye zekhodi ngayinye (noma sonke isikhathi sokwenza):
Uma ufuna ukuthola imininingwane ewusizo njengesimo, imemori esetshenzisiwe noma inombolo efakwe kunqolobane yamafayela, ungasebenzisa lo msebenzi we-PHP:
Ukuze uzuze ku-OPcache endaweni yentuthuko yendawo (okungajwayelekile akunconyiwe), sisebenzisa iqhinga.
I-OPcache isebenza kuwo wonke amaseva anemodyuli ye-OPcache efakiwe futhi lapho i-opcache.enable setting ingasethiwe khona ngokusobala. Sikushiya kanjalo. Sibeka kuphela i-opcache.validate_timestamps = 1 ku-php.ini. Lokhu kusho ukuthi i-opcache.revalidate_freq = 2. Sifeza ukuthi i-OPcache ivuselelwa kabusha cishe ngokuqhubekayo nayo yonke iphrojekthi. Kulawo maphrojekthi lapho sifuna ukwenza khona i-OPcache unomphela, sisebenzisa okuhlobene nephrojekthi ku-.htaccess isilungiselelo esilandelayo:
Ngemuva kwalokho siqala kabusha isiphakeli sewebhu bese sakha umbhalo olandelayo:
Lo mbhalo usula i-cache bese uyakha kabusha ngasikhathi sinye. Manje thina setha esihlobene sokusebenza- RunOnSave umyalo e esizithanda umhleli VSCode: